ရုရှားတိုက်လေယာဉ် - Rikoooo
MIG-21 ရူးပက်ကေ့ FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:7779
Size: 31.8 ကို MB
(:; နာမကိုသတင်းပို့နေတိုးМикояниГуревичМиГ-21: Fishbed ရုရှား) ကအသံထက်မြန်ဂျက်လေယာဉ်သည်အထုပ် possible.The Mikoyan-Gurevich MiG-21 အဖြစ်ကိုမှန်ကန်ဖို့ရလဒ်အဖြစ်နီးစပ်ရဖို့အများကြီးပွုပွငျပွောငျးလဲလည်းပါဝင်သည်, ပြီးနောက်-burners တွေကတူအသစ်သက်ရောက်မှုများလည်းပါဝင်သည် အ Mikoyan-Gurevich ဒီဇိုင်းဗျူရိုကဒီဇိုင်းတိုက်လေယာဉ်, ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Kazunori Ito က & Spike
IRIS Mig-27 Flogger FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 35.17 ကို MB
အဆိုပါ Mikoyan-Gurevich MiG-27 ရုရှား MiG-23 Flogger တိုက်လေယာဉ်မှဆင်းသက်လာတဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များသည်။ အ 1970s ၌ထငျရှား, MiG-27 အိန္ဒိယတွင်လိုင်စင်အောက်မှာ 900 အပါအဝင်နီးပါး 165 မိတ္တူ, တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ IRIS ထုတ်ကုန်နှင့်အညီကျနော်တို့ကဒီမှာ add-on တစ်ခုကဒီအထုပ် t ကိုများအတွက်ထူးခြားသောအရည်အသွေးရှိ ... ဆက်ဖတ်ရန်
Su-22 Fitter FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 17.8 ကို MB
ရုရှားတိုက်လေယာဉ် Su-22 ။ အလွန်ကောင်းသောလေယာဉ်မော်ဒယ်။2repaints နှင့်အတူရရှိနိုင်။ အတောင် variable ကိုဂျီသြမေတြီဖြစ်ကြသည်။ လေထီး braking ရရှိနိုင်။ (မီးခိုးကဲ့သို့) အမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုများ။ အဆိုပါ SU-22 Fitter SU-17 တစ်ခုပို့ကုန်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ! 4'070 KgEngine: ဂရိတ်အကောက်ခွန်လက်နက်တပ်ဆင်အသံ nLyulka AL-21F -... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဇန်နဝါရီ Moravec
Aero Vodochody L-29 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 14.5 ကို MB
ရုရှားတိုက်လေယာဉ်။ လည်းလေ့ကျင့်ရေးအတွက်အသုံးပြုအသေးစားလေယာဉ်ပျံ။ အလွန်ကောင်းသောလေယာဉ်မော်ဒယ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့။ ငါး repaints အတူ။ အသံ Rikoooo.The L-29 Delfin ဂျက်သင်တန်းဆရာဂျက်လေယာဉ်ခကျြ (1959) ကတညျ့အဝါဆောစာချုပ်ကို၏လေ့ကျင့်ရေးစက်ကိုစံတပ်ဖွဲ့များအဖြစ် 1963 အတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသေးသည်။ ဒါဟာဖြောင့်-တောင်ပံလေယာဉ်ပျံခဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
Sukhoi SU-15F FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:6409
ရုရှားတိုက်လေယာဉ် 60s ။3repaints နှင့်အတူရရှိနိုင်။ fly.The Sukhoi SU-15 (နေတိုး code ကို Flagon) ရန်အလွန်ပျော်စရာအ 1960s အတွက်ရုရှားနိုင်ငံအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးရှည်လျားအကွာအဝေးနှင့်အတူတစ် All-ရာသီဥတုကြားဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ 1300 ကော်ပီအကြောင်း built ခြင်း, SU-15 1967 မှ 1996 မှဝန်ဆောင်မှုအတွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, SU-15TM ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မော်ဒယ်: Brett Hoskins texture: သူ Mike Mahat (suite ကို dans readme)
Mikoyan-Gurevich MIG-23 ဆိုဗီယက် FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:9464
Size: 16.6 ကို MB
အမည်: Mikoyan-Gurevich 23 ။ အ Mig 21 အစားထိုးပြီရုရှားလေယာဉ်ပျံ။ အီလက်ထရောနစ်ကွန်ပျူတာနှင့်ထောက်ပံ့။ နယူးမျိုးဆက်သစ်အင်ဂျင်အသစ် radar.It သူတို့ရဲ့ time.The လေယာဉ်ထဲမှာပျံသန်းနေသောအမေရိကန်၏မြား၏အမြင့်မှာဆိုဗီယက်၏လေယာဉ်တသတိထားဖို့အလွန်ဦးနှောက်အာရုံကြောပါ! sweetn နှင့်အတူက Fly ... ဆက်ဖတ်ရန်
Mig-31 Firefox ကိုကြားဖြတ် FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 8.71 ကို MB
Firefox ကို, အဆုံးစွန်လက်နက် (1982) Clint Eastwood ။ ရေဒါအားဖြင့်သိရှိနိုင်, Mach6အထိအရှိန်မြှင်နိုင်သလား, နှင့်မော်ဒယ်များ၏ pilot.The texture အားဖြင့်ကူညီနေတဲ့စိတ်စွမ်းအင်ထိန်းချုပ်ထားသောလက်နက်တွေအလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုကြသည်။ ဒီလေယာဉ်ပျံသေးငယ်တဲ့ဂရပ်ဖစ် configurations များအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။ ဒီ add-on တစ်ခုတ္ထုကနေ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Owen Smoot, Kurt Beswick အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
Su-34 သပိတ် Flanker FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 20 825
Size: 12.9 ကို MB
အဆိုပါ Su-34 (ပို့ကုန်သတ်မှတ်ရေး: SU-32) ကိုနှစ်ပေါင်း 1970-1980 capabilities.During ဆန့်ကျင်ရေငုပ်သင်္ဘော / သင်္ဘောများနှင့်အတူနည်းဗျူဟာရုရှားဗုံးကြဲလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ဆိုဗီယက်နည်းဗျူဟာဗုံးခွဲသူအင်အားသုံး MiG-27 နှင့် Su-24 ကလွှမ်းမိုးခဲ့ပေမယ့် သစ်ခြိမ်းခြောက်မှုဟုခေါ်တွင်စမတ်လက်နက်နှင့်တိကျ စုပေါင်း. မတိုင်မီဆိုဗီယက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Bowe တိုင်ဆန်